Ikhamera ye-100 MP, isikrini se-90 Hz kunye nokunye esiza kukufumana kwiXiaomi Mi MIX 4 | I-Androidsis
Ikhamera ye-100 MP, isikrini se-90 Hz kunye nokunye esiza kukufumana kwiXiaomi Mi MIX 4
Idatha yokugqibela yefayile ye- I-Xiaomi MiX 4 esihlomle ngayo malunga umhla wentetho oya kuba nawo. Ngaphambi koko, sinika ingxelo ngokubhekisele icandelo layo lokufota, apho sichaza khona ukuba le mobile iya kuhlala inzwa entsha I-megapixel ezili-108 ze-Samsung ISOCELL Brigth HMX.
Ngoku ngokolwazi lwamva nje, I-Mi MIX 4 iya kuthwala ikhamera yeepikseli ezingasemva ezilikhulu, ekwafana nokutsho ukuba iyakuba zii-megapixels eziyi-100, kunjalo. Emva koko, iselfowuni yokusebenza ephezulu iya kuthi ixhotyiswe ngescreen ngenqanaba lokuhlaziya le-90 Hz, kunye nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwee-watts ezingama-40. Iya kuba nekhamera yangaphambili ebonakalayo.
La I-90Hz yokubonisa inqanaba lokubonisa Kwaye igumbi lokuphakamisa lulu-setups oludumileyo namhlanje, ke ayothusi. Ngokubiza i-40-watt ekhawulezayo, uXiaomi ubhengeze ngokusesikweni ukuba izakubhengeza itekhnoloji yokutshaja ngaphandle kwamacingo ngokukhawuleza kunentambo namhlanje.
Ukucaciswa okuvuzayo kweXiaomi Mi MIX 4 ngumthombo kwiWeibo
Kuyatshiwo oko Iphaneli ibonelela ngesisombululo seQuadHD + (2K) kwaye inemiphetho egosogoso, Njenge Umboniso wecascade yeVivo Nex 3 iya kuba nayo okanye efanayo. Umzimba wesiphelo sendlela usebenzisa uyilo olupheleleyo lweceramic, ngelixa umphezulu ungenako ukuvuleka.
Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba ikwaboniswa ukuba lixhotyiswe ngeqonga mobile I-Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Iya kuncedisana namathumbu esixhobo ngokudibanisa i-RAM ukuya kuthi ga kwi-12 GB kunye ne-1 TB yeROM. Ukongeza, iyahambelana nenethiwekhi ye5G, yiyo le nto siyilindeleyo. Masiqaphele ukuba umahluko we-5G weMi Mix 3. Kwelinye icala, ikhamera ye-selfie iya kufakwa kumatshini wokuzivelela, njengoko kubonisiwe kwisithuba esingentla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ikhamera ye-100 MP, isikrini se-90 Hz kunye nokunye esiza kukufumana kwiXiaomi Mi MIX 4
I-Google Pixel 4 yayiza kuba nomhla wokubonisa
I-IDC: Ukuhanjiswa kwe-Smartphone kwiHlabathi lonke kuya kuThoba lo nyaka, kodwa i-5G yeTekhnoloji iya kwanda kwi-2020